भाइटीकाको उत्तम साइत कति बजे ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भाइटीकाको उत्तम साइत कति बजे ?
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०७५, बुधबार
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिको बुधवार बसेको बैठकले यही कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा भाइटीकाको साइत उत्तम हुने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । समितिले शुभ बेलाको साइत दिएको जनाइएको छ ।
हनुमन्ते खोलाले बगाएर फेरी एकको मृत्यु
भक्तपुर । हनुमन्ते खोलाले बगाएर एक जनाकाे मृत्यु भएकाे छ। खोलाले मान्छे बगाई ल्याएको भन्ने खबर प्राप्त […]
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमतीय सरकार आवश्यक’
रामेछाप । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेमात्रै संविधान […]
साफ सुजुकी कप : सेमिफाइनलमा नेपालको प्रतिद्वन्द्वी माल्दिभ्स
काठमाडौं । बंगलादेशको ढाकामा जारी साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । आइतबार भएको समूह ‘बी’ […]
न्युन गुणस्तरको १५ थरी औषधीको बिक्री वितरणमा रोक, यी औषधी खान हुँदैन
काठमाडौं । भारतिय तथा नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको १५ प्रकारका औषधि न्युन गुणस्तरिय पाइएको छ । न्युन […]
विदेशबाट गाउँ फर्कनेलाई गाउँमा कन्डम उपहार !
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक गएर फर्किएकालाई यौन शिक्षाका साथै कण्डम दिन […]
बुटवलमा रहेको कोरिया नेपाल इस्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीमा मोटर बनाउने तालिम लिँदै युवा […]